EXCLUSIVE: Manambara ny MondoCon 2017 an'ny Jaw an'i Drew Struzan - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly EXCLUSIVE: Manambara ny MondoCon 2017 an'ny Jaw an'i Drew Struzan
EXCLUSIVE: Manambara ny MondoCon 2017 an'ny Jaw an'i Drew Struzan
by Trey Hilburn III Oktobra 30, 2017
nosoratan'i Trey Hilburn III Oktobra 30, 2017
Manakaiky antsika ny MondoCon. Ny behemoth fankalazana ny mpanangona pirinty dia hidina amin'ny 4 sy 5 Novambra any Austin, Texas ao amin'ny Austin American- Statesman ary tsy afaka miandry isika. Nandritra ny roa herinandro lasa izay, dia nandinika ny sasany tamin'ireo zava-tsoa izay nentin'ilay mpanakanto miloko mahatalanjona niaraka tamin'izy ireo izahay. Ny fanambarana tsirairay dia nahagaga tahaka ny farany ihany. Ny kitapom-bolanay dia efa mangovitra noho ny tahotra noho ny isan'ny zavatra ilainay ampiana amin'ny fanangonana anay.
Amin'ity taona ity, Drew Struzan angano dia hanatrika eo amin'ireo lisitr'ireo mpanakanto efa mahafinaritra ary tsy afaka mifono tena izahay ry zalahy. Struzan dia tompon'andraikitra amin'ny karazana sary malaza ankalazaina nandritra ny taona maro, nanomboka tamin'ny Star Wars ka hatrany Indiana Jones ka hatrany amin'ny Blade Runner (raha hitonona vitsivitsy) dia angano mandeha ity lehilahy ity. Mahitsy hatrany ny fanatrehany ny MondoCon tamin'ity taona ity.
Tsy afaka nientanentana kokoa izahay rehefa nomena ny fotoana hizara manokana ny roa amin'ireo fanontana hoentin'i Struzan miaraka aminy. Mazava ho azy, samy mampientam-po tanteraka izy roa ary ianareo te-hanana ny mpivady, azo antoka fa manao izany isika. Matotra tokoa, ny biby goavam-be an'i Frankenstein sy ny ampakariny dia mbola tsy tsara tarehy mihitsy.
MondoCon dia fankalazana ny zavatra tian'i Mondo, ao anatin'izany ny sarimihetsika, kanto, tantara an-tsary, mozika, kilalao ary sakafo. Herinandro faran'ny herinandro voatondro miaraka amin'ireo mpankafy ao an-tsaina, ahitana mpanakanto sy mpamorona tsy mampino avy manodidina izao tontolo izao, takelaka, fisavana, camion sakafo, isa mivantana ary hetsika mifanentana.
“MondoCon dia fankalazana ny zavatra rehetra tian'i Mondo, ao anatin'izany ny sarimihetsika, kanto, tantara an-tsary, mozika, kilalao ary sakafo, ary faly izahay mizara ny fitiavantsika ny tanànan'i Austin amin'ny fanaovana ny fivoriambe eo afovoan-tanàna ao amin'ny Austin American-Statesman . ” David Rancatore, talen'ny hetsika sy talen'ny hetsika Mondo, no nilaza. “Nampiantranoina ny milina fanaovana pirinty tamin'ny gazety ny toerana ary toerana malalaka ho an'ireo artista, fampirantiana, mpanatrika ary tontonana mahatalanjona rehetra amin'ity faran'ny herinandro ity. Faly be izahay mandray ny seho takarivanay ao amin'ny Alamo Drafthouse any South Lamar, tranon'i Mondo nandritra ny taona maro, ary hankafizan'ny mpankafy anay ilay traikefa nahafinaritra tao amin'ny Drafthouse. ”
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra Mondo sy MondoCon dia mankanesa any amin'ny mondotees.com. Jereo eo, ry havana!
Frankenstein avy amin'i Drew Struzan
Natao pirinty tamin'ny Screen Screening an'ny DL
Ampakarin'i Frankenstein avy amin'i Drew Struzan
Ampakarin'i FrankensteinDrew StruzanFrankensteinMondoCon
Andian-tsarimihetsika 'Nightbreed' amin'ny fampandrosoana, Clive Barker tafiditra
Ity ny fomba fanakanana ireo zavatra vahiny 2 Spoiler